Mauritius inomisa gumi nemana 'resort bubbles' yekudzosa vashanyi vekunze
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mauritius Breaking Nhau » Mauritius inomisa gumi nemana 'resort bubbles' yekudzosa vashanyi vekunze
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Mauritius Breaking Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Chitsuwa cheIndian Ocean chichavhura muzvikamu muna 2021 uye chikamu chekutanga, kubva 15 Chikunguru kusvika 30 Gunyana 2021, chichagonesa vafambi vakabaiwa jekiseni kuti vafarire zororo rekushanyira pachitsuwa ichi.
Vagadziri vanozogona kunakidzwa nezvivakwa mukati mehotera yavo yavanosarudza kusanganisira dziva rekushambira uye mahombekombe.
Vafambi vekuMauritius vane makore gumi nemasere zvichikwira vanofanirwa kubaiwa jekiseni reCovid-18 zvizere.
Air Mauritius, Emirates nedzimwe ndege dzepasi rose dzichawedzera huwandu hwenhandare kubva 15 Chikunguru 2021.
Vafambi vekunze vanozokwanisa kushanya Morishiyasi kubva muna Chikunguru 15, 2021, kutanga kugara mune imwe ye14 "resort bubbles" ayo akagadzirirwa zvakanyanya kuti avatambire kuchitsuwa.
Vagadziri vanozogona kunakidzwa nezvivakwa mukati mehotera yavo yavanosarudza kusanganisira dziva rekushambira uye mahombekombe. Kana vashanyi vakagara kwemazuva gumi nemana uye vaine bvunzo dzePCR dzakaipa panguva yekugara kwavo kunzvimbo yekuzorora, ivo vanobva vakwanisa kubva muhotera voenda pamusoro pechitsuwa ichi vakasununguka kwekuzorora kwavo, vachiongorora zvinokwezva zvakawanda pachitsuwa ichi. Nekudaro, kwekugara kwenguva pfupi, vanogona kubva panzvimbo yacho pakutanga vodzokera kumba.
Nilen Vencadasmy, Sachigaro weMauritius Tourism Promotion Authority vakati: "Mauritius inofara kutambira vashanyi vekunze kubva 15 Chikunguru 2021 nemabhuru edu gumi nemana emahotera ayo anotendera vashanyi vekunze kuti vafarikanye ruzivo rwakachengeteka uye rwekuzorora. Mauritius yakashanda padhuze nemahotera, maairlines pamwe nevanoona nezvekushanya kuti vagadzire uye vagadzirire pfungwa yekushambira pamberi pekuvhurwa kwedu zvizere musi wa14 Gumiguru 1. ”
Vafambi vekuMauritius vane makore gumi nemasere zvichikwira vanofanirwa kubaiwa jekiseni reCovid-18 zvizere. Vanofanira kuita bvunzo dzePCR pakati pemazuva mashanu kusvika manomwe vasati vaenda uye mhedzisiro yakaipa inodiwa kuti vaende kuchitsuwa. Vafambi vachavewo nePCR bvunzo pakusvika kunhandare yendege kuMauritius uye pazuva rechinomwe ne19 rezororo ravo rekushanya, sezvazvinoshanda.
Air Mauritius, Emirates nedzimwe ndege dzepasi rose dzichawedzera huwandu hwenhandare kubva musi wa15 Chikunguru 2021 iyo ichawedzera mukutungamira kusvika pakuvhurwa kuzere kwa1 Gumiguru 2021. KweChikamu 2, kubva musi wa1 Gumiguru 2021, vafambi vakabayiwa jekiseni vachabvumidzwa kupinda pasina zvirambidzo pakuratidzwa kweyakaipa PCR bvunzo yakatorwa mukati maawa makumi maviri nemaviri isati yasimuka.
Chiziviso ichi chinotevera kukurumidza kwemushandirapamwe wekudzivirira uye kufambira mberi kwakaitwa pakurwisa hutachiona pakupera kwaGunyana. Vashandi vekushanya vakaiswa pamberi panguva yekubuda kwejekiseni. Izvi zvakagonesa kutanga nekukurumidza uye kwakachengeteka kweindasitiri yekushanya yeMauritius.
Mhinduro yenyika kudenda yakaverengerwa pakati peimwe yeakanakisa pasirese sezvo Hurumende yeMauritian yakapindura nekukasira neyakaomarara nzira dzekudzora nezvibvumirano. Kuchengetedzwa kweMauritians nevashanyi kwave kuri kwekutanga kukosheswa kubvira pakatanga Covid-19 uye kubudirira imhedzisiro yekudyidzana kweHurumende yeMauritius pamwe nevanhu venyika.
Vashanyi vepasirese vanogona kubhuka zororo ravo rekushanya kungave kuburikidza nevashanyi vekushanya kana zvakananga nehotera. Mamwe mahotera makumi matatu neshanu akasimbiswa semahotera akazara ekuzvitsaurira ayo achazovhurika chete kune vasina kubayiwa vagari vemuMauritius, avo vakaroora pamwe nevana pavanodzokera kuMauritius. Iyi gadziriro haiwanikwe kune vasina-kubaya vashanyi vekunze. Vashanyi mumahotera akazara ekuparadzanisa vanhu vanofanirwa kupedzisa mazuva gumi nemana-mumba mekupatsanurwa.